SFCX စီးရီး ရေဖုန်မှုန့်နှင့် တိုက်စားမှုဒဏ်ခံ socket box
1. မိုးပိုလေလေ၊ စိုထိုင်းဆများလေလေနှင့် ပိုလေးသောဆားဖြန်းသည့်နေရာများ။
2. လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်သည် စိုစွတ်ပြီး ရေငွေ့ထွက်သည့်နေရာလည်း ရှိသည်။
3. အမြင့်ပေ 2000 မီတာထက်မပိုပါ။
4. လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မီးလောင်လွယ်သောဖုန်မှုန့်များဖြစ်သည့် သဲနှင့် ဖုန်မှုန့်များ ပါဝင်သည်။
5. လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အက်ဆစ်အားနည်းသော အက်ဆစ်များနှင့် အားနည်းသော အောက်စ့်များကဲ့သို့သော အဆိပ်ဓာတ်ငွေ့များပါရှိသည်။
6. ရေနံ၊ ဓာတုဗေဒ၊ အစားအစာ၊ ဆေးဝါး၊ စစ်ဘက်၊ သိုလှောင်ရုံနှင့် အခြားနေရာများတွင် အသုံးချနိုင်သည်။
7. ယာယီ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းအလုပ်များအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက် အဓိကအသုံးပြုသည်။
SFK-g စီးရီး ရေဖုန်မှုန့်နှင့် တိုက်စားမှုဒဏ်ခံ ထိန်းချုပ်ရေးသေတ္တာ (သံမဏိ အကာအရံများ)
SFK-L စီးရီး ရေနှင့် ဖုန်မှုန့် ထိန်းချုပ်ရေး သေတ္တာ
SFJX-S စီးရီး ရေဖုန်မှုန့်နှင့် တိုက်စားမှုဒဏ်ခံ လမ်းဆုံဘုတ်(ပလပ်စတစ်အကာအရံ အပြည့်အစုံ)
7. အလင်းရောင်၊ ပါဝါ၊ ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းများအတွက် ချိတ်ဆက်မှုများ။
SFJX-L စီးရီး ရေဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်သော လမ်းဆုံဘုတ်
SFZ-g စီးရီး ရေနှင့်ဖုန်မှုန့်နှင့် တိုက်စားမှုဒဏ်ခံ လုပ်ဆောင်ချက်ပို့စ် (သံမဏိအကာအရံများ)
SFZ-S စီးရီး ရေဖုန်မှုန့်နှင့် တိုက်စားမှု ဒဏ်ခံ လုပ်ဆောင်ချက် ပို့စ် (ပလပ်စတစ် အကာအရံ အပြည့်အစုံ)
LNZ စီးရီး ရေနှင့် ဖုန်မှုန့် ဒဏ်ခံ လုပ်ဆောင်ချက် ပို့စ်
SFDZ စီးရီး ရေဖုန်မှုန့်နှင့် တိုက်စားမှုဒဏ်ခံ ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ
7. ဆားကစ်အား မကြာခဏ အဝင်အထွက်များစေပြီး ထိန်းချုပ်ထားသော ဆားကစ်အား ဝန်ပိုအားနှင့် ဝါယာရှော့မဖြစ်စေရန် ကာကွယ်ပေးသည်။